Chemishonga Midziyo Fekitori | China Pharmaceutical Equipment Vagadziri uye Vatengesi
Sezvo iri yega yenyika R & D nzvimbo yekuuraya hutachiona & yekudzivirira michina, SHINVA ndiyo huru yekunyora unit yenyika uye indasitiri standard yekushambidza michina. Zvino SHINVA ndiyo huru yekugadzira hwaro hwekudzivirira uye michina yekuuraya hutachiona munyika. SHINVA yapfuura advertising pamusoro ISO9001 yepamusoro hurongwa, CE, ASME uye kumanikidzwa mudziyo utariri hurongwa.
SGL yakateedzana svutugadzike svutugadzike inonyatso kusangana nezvinodiwa zveGMP zviyero uye inoshandiswa zvakanyanya pakuvharisa maturusi, zvipfeko zvisina mbichana, mabhavha ekumisa, aruminiyamu makapu, zvigadzirwa zvakagadzirwa, mafirita uye tsika yepakati munzvimbo dzeinjiniya yemishonga, zvekurapa uye zvehutano, mhuka murabhoritari zvichingodaro.
GR Series kushandisa michina hurongwa
BZ Series otomatiki Package system
Otomatiki package system inosanganiswa ne otomatiki mwenje kuongorora, otomatiki katoni uye otomatiki palletizing emhando dzakasiyana infusion, inova ichangoburwa chizvarwa chemishonga michina. Iko kushandiswa kwesisitimu ino hakungoderedze zvakanyanya huwandu hwevashandi kudzikisa kusimba kwevashandi, asi zvakare kunatsiridza otomatiki nhanho ye IV mhinduro yekugadzira michina kusimudzira mufananidzo wese wekambani yemishonga.